Mophie weputara New 10W Wireless Charging Base | Akụkọ akụrụngwa
Mophie weputara ohuru 10W wireless wireless base
Companylọ ọrụ ngwa ngwa eji arụ ọrụ igwe na-ebupụta ntọala ikuku ikuku ọhụụ maka iji ya na ngwaọrụ dakọtara. Ke adianade do, ọ kwesịrị ekwesị ka ojiji na ngwa ngwa odori technology si Samsung na Apple. Ọ bụ ihe gbasara Mophie Charge Stream Pad +.
Ikuku Nchaji bụ ọkwa ọhụrụ nke ngwaọrụ mkpanaka niile ga-ewebata. Nke a bụ otú ụlọ ọrụ ahụ si ahụ ya na nke a bụ ihe ndị ọrụ na-arịọ maka. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ dịka Apple kpebiri ịmalite ma ọ bụ na ọ bụghị nhọrọ ha kachasị mkpa-anyị ka na-eche ka ewepụta ike Airpower-, ndị ọzọ na-egwu egwuregwu na mpaghara ahụ na-abịa n'ihu ma nyefee nzọ ha. Mophie abụghị onye rookie, ma na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ikuku wireless. Ugbu a Mophie Charge Stream Pad + nwere teknụzụ 10W Qi.
Ihe omuma ohuru a biara iji dochie uzo mbu ya nke kwadoro ihe ruru 7,5W. Na nke a, ịnwere ike iru 10W nke ịtụ ike. Na ngwa Ọ lekwasịrị anya n'ụdị dịka iPhone X, Samsung Galaxy S9, iPhone 8 na ụdị ndị ọzọ adịbeghị anya nke pụtara n'ahịa. Ugbu a, anyị chetakwara na ụdị Apple na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa nke 7,5W, ebe ụdị Samsung ruru 9W.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-adụ ọdụ na ntọala ọhụrụ ya dakọtara na okwu ya Juice Pack, yabụ ndakọrịta na ụdị ndị ọzọ ga-emepe nke ukwuu. Mgbe Mophie Charge Stream Pad + ga-arụ ọrụ ọbụlagodi na ngwaọrụ gị nwere mgbakwunye.
N'ikpeazụ, dịka nkwupụta mgbasa ozi ahụ, ngwa a dị site na ụlọ ahịa Verizon, yana ndị na-ekesa ndị ọrụ gọọmentị. Na Spain ọ ga-ekwe omume ịzụta ya - ọbụlagodi na ọ pụtaghị na weebụsaịtị ndị nrụpụta. The ngwugwu ahịa ga-agụnye a Ndenye chaja QuickCharge 2.0 na eriri microUSB 1,5 mita ka isi wee rụọ ọrụ. Pricegwọ ya bụ 59,95 dollar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Mophie weputara ohuru 10W wireless wireless base
Spotify ga-ebido onye ọkpụkpọ ụgbọ ala na Eprel 24